Dragons kwi-Buddhist Mythology, Art, kunye neNcwadi
Iinyoka ezinkulu zeBuddhist Art and Literature
UbuBuddha beza eChina baseIndiya phantse iminyaka engama-2 edlulileyo. Njengoko ubuBuddha besasazeka e-China, buya kufanana nesiChina. Iimonkxi zayeka ukugqoka iingubo ze- saffron zemveli kunye nezambatho zesiTshayina, umzekelo. Kwaye e-China, iBuddhism yadibana nama-dragons.
Iidragon ziyinxalenye yenkcubeko yaseShayina ubuncinane iminyaka engama-7 000. E-China, ii-dragons sele zifanekisela amandla, ubuqili, izulu kunye nenzuzo.
Zicingelwa ukuba zinamandla phezu kwamagumbi amanzi, imvula, izikhukula, neziphepho.
Ekuhambeni kwexesha, abaculi baseChina abaBuddhist bamkela injoka njengesimboli sokukhanya . Namhlanje ii-dragons zihlobisa uphahla kunye namasango eetempileni, zombini njengabagcini kunye nokufuzisela amandla okugwala okucacileyo. Iidonons zaseBuddha zisoloko zibonakaliswa zibambe i-jewel jewel, emele imfundiso kaBuddha.
Dragons kwi-Chan (Zen)
Ngekhulu le-6, uKhan (Zen) waphuma eChina njengesikolo esahlukileyo sobuBuddha. UChan wayekhuliswe ngesiko lesiShayina, kwaye izidons zenza ukubonakala rhoqo kwiincwadi zeChan. Inamba idlala indima emininzi - njengophawu lokukhanyisa kunye nokuzibonakalisa. Ngokomzekelo, "ukudibana nenjoka emqolombeni" ngumzekeliso wokujongana noloyiko olunzulu kunye nemithintelo.
Kwaye ke kukho intetho yaseTshayina ye "inamba yonyani," eyamkelwa njengomzekeliso ngabafundisi abaninzi.
U-Yeh Kung-tzu wayeyindoda eyayithanda imirhubhe. Wafunda i-dragon dragon and decorated home with paintings and statues of dragons. Wayeza kuthetha malunga needroons kwanomntu owayeza kuphulaphula.
Ngelinye ilanga inyoka yava ngoYe Kung-tzu kwaye yacinga, indlela enhle ngayo le ndoda iyayixabisa. Ngokuqinisekileyo kuya kumvuyisa ukufumana inamba yenyani.
Inene inyoka yadlulela endlwini kaYeh Kung-tzu yangena ngaphakathi, ukufumana uYeh Kung-tzu elele. Emva koko uYeh Kung-tzu waphaphama waza wabona intombazana ibhokwe ngombhede wakhe, izikali zayo namazinyo ezikhazimulayo ekukhanyeni kwenyanga. Kwaye uYeh Kung-tzu wamemeza kakhulu.
Ngaphambi kokuba inyoka ikwazi ukuzisiza, uYeh Kung-tzu wambamba ikrele waza waphaphazela inamba. Inyoka yadlula.
Izizukulwana ezininzi zikaTan noZen ootitshala, kuquka i- Dogen , bathethe inyaniso yenkwenkwezi kwiimfundiso zabo. Umzekelo, i-Dogen yabhala kwi-Funkanzazengi, "Ndiyanincenga, bahlobo abanomdla ekufundeni ngamava, musa ukujwayele imifanekiso endiyikrakra yinyoka."
Njengengqungquthela, ibali lingachazwa ezininzi iindlela. Kungaba yinto engumntu umntu onentshisekelo yengqondo eBuddhism kwaye ufunda ezininzi iincwadi malunga nalo, kodwa ngubani ongenakuziva ukuba ufuna ukuzenza , utye utitshala okanye uthathe iindawo zokuhlala . Umntu onjalo ukhetha uhlobo lwamaBuddhism into yangempela. Okanye, kusenokubhekisela ekubeni ukwesaba ukuyeka ukuzinamathela ukuze ubone ukukhanya.
Nagas kunye neDragons
I-Nagas iinjongo ezinjengeenyoka ezibonakala kwiCan Canon . Ngamanye amaxesha bachongwa njengama-dragons, kodwa banemvelaphi eyahlukileyo.
I-Naga ligama lesiSanskrit le-cobra. Kwimveli yamandulo yaseNdiya, i-nagas ibonakaliswa njengomntu ukusuka okhalweni kunye neenyoka ukusuka okhalweni. Kanti ngamanye amaxesha kubonakala njengamaqabunga amakhulu. Kwezinye iincwadi zesiHindu neBuddha, zinokutshintsha ukubonakala komntu ukuya kwinyoka.
Kwi -Mahabharata , imbongo yesiHindu, i-nagas ibonakaliswa njengezilwanyana ezinokuzilimaza. Kwimbongo, intshaba ka-nagas ingumkhosi omkhulu-ukhokho uGaruda.
Kwi-Canon ye-Pali, i-nagas iphathwa ngokuthethelela, kodwa ihleli ngonaphakade emfazweni kunye ne- garudas , ngaphandle kwexesha elifutshane elixoxwa yiBuddha. Ekuhambeni kwexesha, i-nagas yaboniswa njengabagcini bentaba yeMeru kunye noBuddha. I-Nagas ibamba indima ebalulekileyo kwiimfihlakalo zaseMahayana njengabakhuseli be-sutras. Ungayifumana imifanekiso kaBuddha okanye ezinye izilumko ezihleli phantsi kombhobho wendawo enkulu ye-cobra; oku kuya kuba yinaga.
Njengoko ubuBuddha besasazeka ngeChina kunye naseJapan naseKorea, i-nagas yaza yachongwa njengoluhlobo lwenyoka. Amanye amabali atshelwa e-China naseJapan malunga needokoni zavela njengeendaba malunga nagas.
Kwiingoma zeBibetan zeBibetan, nangona kunjalo, ii-dragons kunye ne-nagas zihlukeneyo ngezidalwa. E-Tibet, i-nagas ibininzi imimoya ehleliyo yamanzi ebangela izifo kunye nentlekele. Kodwa ama-dragon dragons abakhuseli bobuBuddha abavakalayo ngamazwi abo athuphayo.
Yintoni i-Austin Stone? Malunga neCommestone Limestone